Inta la hubo ku dhawaad 15 qof ayaa ku dhintay tiro ka badan 30-na way ku dhaawac-meen duqaymo diyaaradaha Maraykanku ay gaysteen koonfurta dalka Soomaaliya. – Radio Daljir
Inta la hubo ku dhawaad 15 qof ayaa ku dhintay tiro ka badan 30-na way ku dhaawac-meen duqaymo diyaaradaha Maraykanku ay gaysteen koonfurta dalka Soomaaliya.
Qooqaani, Nov, 25 ? Ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay ku dhawaad 30 kale dhaawacyo kale duwan ayaa soo gaaray, kaddib markii diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Maraykanku ay duqaymo cirka ah ka gaysteen deegaannada Taabta, Qooqaani, iyo Bilis oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Hawl-galadaan dhanka cirka ah ayaa diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Maraykanku waxay la bartilmaameed-sadeen fariisimo deenno ku yaala gobolka jubbada Hoose ay ku leeyihiin kooxda Al-shabaab, waxaana la tilmaamayaa in dadka ku dhintay duqayntaasi ay u badan-yihiin saraakiil ka tirsan kooxda Al-shabaab, sida ay radio Daljir u xaqiijiyiin dad goob-joogayaal ah.
Dalka Soomaaliya ayaa ku dar-maday dalalka diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Maraykanku ka fuliyaan hawl-galada duqaymaha cirka ah, waxaana horay dawaladda Maraykanku hawl-galadaasi oo kale uga fulisay dalalka Afghanistan, Pakistan, Libya, Yemen, iyo Ciraaq.